Erehe nke WordPress nke Akpanaka Download nke PetrPikora.com
Ereme Mpempe akwụkwọ WordPress The Premium Download
Ereme Mpempe akwụkwọ WordPress The Premium Download WordPress Okwu Okpokoro.
Budata Okwu Ekele nke WordPress
Ịkụzi igwe na ọgụgụ isi
Niile PetrPikora.com bụ ndebiri dị na Machine Learning and Artificial Intelligence, ha na-etinyekwa atụmatụ ndị nwere ọgụgụ isi ga-enyere gị aka ibute saịtị gị na weebụ weebụ.
Uche Web Web
Ụkpụrụ PetrPikora.com na-akwado nhazi weebụ weebụ (RWD), nke pụtara na ebe nrụọrụ weebụ gị ga-egosi n'ụzọ zuru oke ma na ngwaọrụ ọ bụla, ị gaghị agba ọsọ n'ime ihe ọ bụla mmachibido na ngwaọrụ Apple, ngwaọrụ gam akporo, Blackberry, Windows igwe, nnukwu monitors, obere mbadamba, mbadamba nkume, kọmputa, na ihe ndị ọzọ.
Anyị onwe anyị maara otú
All of our petrPikora.com templates jiri ojiji anyi guzosiri ike ogologo oge iji nye ha ihe di iche iche na ohere ndi i gaghi achuta n'ime ngwa ahia. Bụrụ ọhụụ a gosipụtara, nkuzi igwe, na ọgụgụ isi nke metụtara ọrụ ọchụchọ dịka Google na ndị ọzọ na-ahụ ndebiri anyị. Niile ndebiri anyị na saịtị niile na-edekọkarị robot anyị na-indexing, bụ nke na-enyefe data na ọrụ ntinye ederede kachasị elu ma na-akpaghị aka na nkwalite nke weebụsaịtị niile na ndebiri anyị!
Ndị ndebiri PetrPikora.com na-akwado Edge na Internet Explorer 7, 8, 9, 10, 11, Firefox, Chrome, Opera, Safari, ihe nchọgharị weebụ (nhazi ngwa ngwa) na ihe nchọgharị weebụ ndị ọzọ.
Niile PetrPikora.com emeziri atụmatụ maka SEO na SEM iji nyere gị aka ịchọta ebe kachasị mma search engine na ọtụtụ puku ndị ahịa.
PetrPikora.com ndebiri nkwado imewe maka WordPress isiokwu gụnyere WooCommerce, Drupal, Joomla, Magento, Blogger, PrestaShop, peeji nke HTML peeji nke na ndị ọzọ.
Wijetị / Ọnọdụ / Mpaghara
Templates PetrPikora.com na-enye nhọrọ dị elu ịmepụta na fanye nọmba nke omenala Ngwaọrụ ebe gụnyere ọnọdụ na mpaghara, ma e wezụga ọtụtụ ntọala akpaka. Ị nwere ike ịhọrọ aha maka ọnọdụ ọhụrụ, ịnwekwara ike ịnyegharị aha ndị dị.
Mmekọrịta nke mgbasa ozi mgbasa ozi
Niile PetrPikora.com ndebiri na-akwado ọrụ ndị dị ka Facebook, LinkedIn, Twitter na ndị ọzọ.
Niile PetrPikora.com ndebiri akwado nkwado HTML5 na CSS3.
PetrPikora.com ndebanye zuru ezu na-akwado W3C Valid HTML na CSS, nke na-emesi obi ike kpamkpam omume niile isi ihe nchọgharị weebụ.
Nkwado na mmelite n'ọdịnihu
Niile PetrPikora.com ndebiri ga-emelite maka oge ọzọ, n'ihi ya, ị gaghị ada mbà iji nweta template agbajiri. Anyị na-etinyekwa uche na nche nke anyị na-emewanye ma na-emelite mgbe niile.
Ụkpụrụ nwere ntọala omenala nke na-enye gị ohere idezi nkụnye eji isi saịtị, isiokwu na ọdịnaya, ịkparịta ụka n'Ịntanet, nkụnye eji isi mee, ihe ndabere, mpagharabar, wijetị, agba, ntọala nhazi, ntọala dị elu, shortcode, map Google, ụdị ịkpọtụrụ, SEO, peeji nke njehie, Google Analytics , na ihe ndị ọzọ.
downloaddownloadsfree downloadndebiri efufree themesminecraftadịchaghị isiokwudownloadstemplatendebiriisiokwuGburugburuWordPress